Cela iSemalt: Iyiphi indlela elula kunayo yonke ukuLawula ugaxekile loThutho
Emva kokufaka i-Google Analytics, ukuba uqaphela ukuba i-traffic yakho iye yanda ngokungathandabuzekiyo, kuyimpawu yokuba iwebhusayithi yakho ifumana iimbonakalo ezifakekileyo kwaye kufuneka uthabathe amanyathelo okuba ulahlwe ngokukhawuleza.
I-Artem Abgarian, iMenejala yeMpumelelo yoMthengi we-10 (Semalt , uyayilumkisa ukuba ngelanga, akukho ndlela echanekileyo yokususa ugaxekile kwi-Google Analytics ngokusisigxina. Nangona kunjalo, unokunciphisa ingozi ngokusebenzisa iindlela ezininzi - bike kid carrier.
I-spam bots kunye nokusetyenziswa kwazo
Esinye sezizathu eziphambili esizifumanayo ukuthunyelwa kogaxekile yi-bots spam. Abagculeli bayila ngeendlela eziliqela kwaye bazama ukubandakanya inani elikhulu labantu ekukhankeni iiwebhusayithi zabo. Bathumela ii-link kunye nebhokisi lakho lokungenayo kwaye bazenze ukuba banokuvelisa ezininzi zendlela. Xa ucofa kulawo maqhagamshelwano, uya kubona ukuba isayithi lakho lifumana ezininzi izithuthi, kodwa eso sithuthi asinanto nento. Abagxeki basebenzise i-spam bots ukuba bakhohlise.
Iintlobo zokuhanjiswa kogaxekile
I-bots spam zisebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokudala u-spam wokuhanjiswa: nge-breathings referrals kunye ne-trawler referrals. I-Google Analytics ayikwazi ukuvavanya okanye ukugweba okuthunyelwa kwintambo kunye nento ekudluliselwa kuyo. Ukuthunyelwa kwezinto ezibonakalayo xa kuvela iGoogle Analytics iqhutywe ngetrato okanye engaziwayo, ngelixa uhanjiswe ngokukhawuleza kwenzeka xa isayithi lakho lifumana inani elikhulu leembono ezivela kwimithombo engaziwayo. Udinga ukususa i-bots kuba kufuneka unciphise umthwalo kumaseva akho nakwiwebhusayithi yakho. Kwakhona kubalulekile ukufumana idatha echanekileyo esuka kwi-Google Analytics kwiziko lempilo yakho..
IiNdawo eziPhambili zoLwazi lweSpam
Akuyi kuphazamiseka ukuthetha ukuba kukho iindawo ezininzi ze-spam kodwa ezidumileyo zi-darodar.com, ilovevitaly.co, semalt.com, kunye namaqhosha-for-website.com. Kubalulekile ukuhlala kude nala mawebhusayithi kunye nezinye izingosi ezifanayo njengoko zingonakalisa isayithi lakho kwaye zingonakalisa i-Google AdSense.
Ukususwa kweeBots kunye ne-Spiders
Unako ukususa izichukumisi eziziphethe kakuhle kunye nebhodi kwi-data yakho ngokulungisa izicwangciso zakho. Ukuba awuzibambi okanye uzikhuphe ngokukhawuleza, kunokwenzeka ukuba indawo yakho iya kubonakaliswa. Uninzi lwe-bots kunye neziguncu zikhangeleka kwindawo efanelekileyo, kodwa ngokwenene zilimaza idatha yakho ye-intanethi kunye ne-intanethi. I-Google Analytics inikezela ngeendlela ezahlukeneyo, iingcebiso, iingcebiso kunye neengcebiso zokuzisusa kwiwebhusayithi yakho. Unokuya kwicandelo lomlawuli ukujonga ukuhlaziywa okutsha kwaye ulungele izicwangciso zakho ngokufanelekileyo.
njani ukususa iiReferrals zomoya?
Emva kokuvavanya ezinye iikhathalo, ndifumene ukuba kulula ukuvimbela ukuthunyelwa kwezinto ezifayo ngokufaka nokucwangcisa iifayile zakho. Qinisekisa ukuba usebenzisa iintlobo zezihlunu ukuze ukwandise ukhuseleko lwakho lwe-intanethi. Kumelwe kwakhona usethe iifayile ezichanekileyo zokusasaza. Ngenxa yoko, kufuneka ubeke i-ID yakho yokulandelela okanye inombolo. Makheke apha ndikuxelele ukuba i-bots zihlakaniphile kakhulu; abayi kuvumela nayiphi na ithuba ithuba lokuya xa isayithi lakho okanye i-Google Analytics engonakali.
Susa iSafa sokuThuthukiswa koKhuseleko
Emva kokuba ulungelelanise izicwangciso ezilapha ngasentla, isinyathelo esilandelayo kukuba uzalise isihlomelo esilungileyo segama lomsindisi esiza kugcina indawo yakho kunye ne-Google Analytics iphephile kwi-spam yokuthumela. Akufanele ulibale ukuba abahambahambayo batyelela indawo yakho ngoku kunye nokuzama ukulimaza idatha yakho. Yingakho kufuneka uwasuse kwiziko lakho kunye ne-Analytics yakho yokuqala.